ZTF vanoumba muitiro - China Shijiazhuang Zhongtai Pipe
I. chii ZTF?
ZTF iri mhando rokuumba zvigadzirwa yakataurwa Zhongtai Company muna 2005, izvo zvakawanda michina yemhando yepamusoro kubva mumhuri uye dzakawanda, uye ipapo kuwana "Technology Innovation Award" by China Cold Achigadzira Steel Association.
1) Rega anofanira kuchinja anoumba vari kuparara chikamu, achiponesa vanenge 60% mutengo pamusoro mabhanzi
2) Roll kuchinja nguva watemwa kwazvo, Kuparara chikamu haadi kuchinja achitanga uye chete kuchinja zvakanaka. Uye unogona kucheka-pasi zvibereko kumwedzi.
3) Release basa zvikuru.
4) Roll achiumba ano, ari caliber chakasiyana uye akanzwira nokuda X70, N80 simbi zviuno.
5) The simbi ubvise iri akavhiringika uye beared zvakawanda zvine, kuderedza kwiza pakati wonamatidza uye chinotenderera, uye kuderedza tsvina yacho chinotenderera.
6) Zviri nyore kuti adzorere uye kugadziridza chinotenderera.
II. Apo rinoshandiswa ZTF?
Mabhanzi mu Kuparara muchikamu
Kumboda Common Use
Marongerwo uye Kugadziridzwa pamusoro
Manually kuchinja, hwomukova & mukuvhara kutenderera uye vaizoitwazve yokumusoro mabhanzi, rezasi mabhanzi kuvhura & nokuvhara pamusoro mugodhi. Manually chinja nokukurumidza kusunungurwa kana chinjika nepanhovo.
Electric kuchinja, hwomukova & mukuvhara kutenderera uye vaizoitwazve okumusoro mabhanzi, tilting ezasi mabhanzi opeing & nokuvhara rakaitwa mupumburu zvigaro. Electric kuchinja nzvimbo pakati mabhanzi iyo inotongwa sikuruu.
Electric kuchinja, hwomukova & mukuvhara kutenderera uye vaizoitwazve yokumusoro mabhanzi. Computer kuchinja tilting repasi mabhanzi kuvhura & nokuvhara pamusoro rwakapetwa nezvigaro, nzvimbo pakati mabhanzi iyo inotongwa sikuruu
Marongerwo uye Kugadziridzwa pamusoro Swiveling Vertical Rolls
Manually kudzora kuchinja nokuda kuvhurika & closeing, vachisimudza uye kutenderera chaiwo munyonga mabhanzi.
Manually kana electromotion kudzora kuchinja nokuda kuvhurika & mukuvhara, vachisimudza uye kutenderera chaiwo munyonga mabhanzi.
Electric kuzvidzora kuchigadzirisa nokuda kuvhurika & closeing, vachisimudza uye kutenderera chaiwo munyonga mabhanzi.
Computer kudzora kuchinja nokuda kuvhurika & closeing, vachisimudza uye kutenderera chaiwo munyonga mabhanzi.
Kuchinja Wevamwe Rolls mu kungoda Achigadzira Section
Rollers anofanira kutsiviwa kana kugadzira itsva kukura nenyere.
The mabhanzi inozarurwa pamusoro nomubato, manually kuchinja nokukurumidza kusunungurwa uye chinjika nepanhovo, vachisimudza okumusoro mabhanzi.
The mabhanzi inozarurwa pamusoro mugodhi kana rwakapetwa nezvigaro, manually kuchinja nzvimbo pakati mabhanzi iyo inotongwa sikuruu, Nokusimudzwa rokumusoro mabhanzi.
The mabhanzi inozarurwa pamusoro mugodhi kana rwakapetwa chigaro. Electric chinja nzvimbo pakati mabhanzi iyo inotongwa sikuruu. Computer chinja Nokusimudzwa rokumusoro mabhanzi.
Micro-kuchinja mudziyo nokuda Side Vertical Rolls mu Final Achigadzira uye Sizing Section
Kuchinja nokuti Rolls Position
Kukumbira Electronic Control
Zvakarurama Rolls Position Kugadziridzwa
Operation Site pamusoro Rolls nzvimbo Kugadziridzwa
Deformation of Pipe Blank Edge
The Órgãos nokuti High Rrecision, High Steel Grade uye gobvu Wall Pipe
Nguva Kutsiva Rolls
m / Maminitsi
Stainless simbi cône Anoumba rinopfungaira muchina